शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब - कारीगरी र सबै भन्दा राम्रो खुद्रा बिक्री जब | USAHello | USAHello
शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब – कारीगरी र सबै भन्दा राम्रो खुद्रा बिक्री जब
खुद्रा र बिक्री जब तपाईं घर देखि गर्न सक्छन् कि को क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो बिक्री जब सिक्न, काम.
बिक्री व्यक्ति बिक्री मा कम्पनी प्रतिनिधित्व भन्ने तथ्यलाई गर्न स्टोर मा सामान को बिक्री देखि सबै अर्थ. यो पनि घर कारीगरी मा काम गर्न बिक्री मौका प्रदान गर्दछ. बिक्री फैशन देखि स्वास्थ्य हेरविचार गर्न, धेरै अन्य उद्योग ओभरल्याप. यो बिक्री जब हुन सक्छ अस्थायी काम, तर सबै भन्दा राम्रो बिक्री जब को एक आजीवन पेसा हुन सक्छ.
खुद्रा बिक्री समावेश, जो सीधा मानिसहरूलाई बिक्री कुराहरू अर्थ. खुद्रा बिक्री मा काम लाखौं मानिसहरू. त्यहाँ सधैं खुद्रा बिक्री प्रतिनिधिहरु लागि ठूलो माग छ, तर यी कार्यहरू सधैं राम्रो-भुक्तानी छैन.
बिक्री पनि यस्तो स्टोर रूपमा विक्रेता को निर्माता कुराहरू को बिक्री समावेश. यो पनि यस्तो अस्पताल रूपमा ठूलो प्रयोगकर्ता हुन सक्छ,. यो पनि यस्तो विज्ञापन र बीमा रूपमा उत्पादन र सेवा को बिक्री समावेश.
बिक्री प्रदान गर्दछ विभिन्न जब उद्योग. यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्:
बिक्री सहायक – पसलमा काम सानो अनुभव वा अनुभव बिना अल्पकालीन को राम्रो काम वा अस्थायी छ. त्यहाँ सधैं खुला रिक्तियों छन्.
कोषाध्यक्ष – को दोहोरिने कार्यहरू आपत्ति गर्दैन नगर्ने कसैले लागि राम्रो काम. तपाईंले लामो अवधि लागि खडा र ग्राहकहरु संग एउटा अनुकूल सम्झौता कायम गर्न आवश्यक.
फोन बिक्री – मोबाइल फोन बिक्री घरमा काम गर्न लचीलापन दिन्छ, तर यो एक राम्रो तलब प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ.
प्रतिनिधि औषधि बिक्री – औषधि र चिकित्सा उपकरण समारोह को बिक्री भुक्तानी, तर छ प्रतिस्पर्धी मानिन्छ. यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य हेरविचार को क्षेत्र मा विशेषज्ञता र ज्ञान आवश्यक छ.
प्रविधि बिक्री प्रतिनिधि – माइक्रोसफ्ट, आईबीएम, एडोब, को कौशल कम्पनीहरु भएका बिक्री प्रतिनिधिहरु उच्च ज्याला बिक्री धेरै प्रविधि भेटी जब बीच Sellsvors.
बिक्री प्रबन्धक – बिक्री प्रबन्धक टोलीमा को नेता बिक्री प्रतिनिधिहरु को योजना र व्यवस्थापन मा काम गरिरहेको छ छ
.बीमा बिक्री – राम्रो बीमा विक्रेता मान्छे तिनीहरूलाई बेच्न सल्लाह रूपमा धेरै. बीमा बिक्री आवश्यक प्रशिक्षण र राज्य को लाइसेन्स.
अचल सम्पत्ति – सम्पत्ति बिक्री पैसा धेरै कमाउने अवसर प्रदान गर्दछ, तर यो एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो. रियल एस्टेट दलाल र बिक्री प्रतिनिधिहरु सरकार लाइसेन्स र व्यवस्था बारे ज्ञान को धेरै आवश्यक.
अनलाइन बिक्री – उत्पादनहरु अनलाइन बिक्री कसैले लागि राम्रो क्षेत्र आफूलाई लागि काम गर्न चाहन्छु छ.
विज्ञापन बिक्री – कम्पनीहरु र व्यक्तिहरूलाई लागि विज्ञापन बिक्री एक समारोह अक्सर द्वारा फोन गरेको छ छ. अनलाइन विज्ञापन प्रक्रिया धेरै खोज इन्जिन र ई-वाणिज्य को विशेष ज्ञान आवश्यक.
बिक्री जब मेरो लागि सही काम गर्न छ?
सबैलाई व्यक्तिगत बिक्री छ! बिक्री कार्य मान्छे फिट र अनुकूल व्यक्ति, नम्र हुनु, र मास्क. पत्यार पार्र्ने तपाईं पत्यार पार्र्ने मान्छे मा राम्रो छौं अर्थ. ग्राहकहरु यो उनीहरूले के चाहनुहुन्छ थाहा हुनेछ जहाँ तपाईं राम्रो प्रत्यायोजन गर्नेछ भनिरहेका छन् के सुन्न.
मान्छे आफ्नो जीवनमा अन्य कुराहरू मा काम गर्न को लागि फोन समारोह मार्फत Ooualembaat खुद्रा बिक्री मा सेल्स राम्रो छ. फोन बिक्री काम तपाईंले घरमा अनुमति दिन्छ, र फेरबदल मा खुद्रा काम गर्न जब तपाईं अनुमति.
तपाईं पूर्व अनुभव बिना काम खुद्रा वा फोन बिक्री समारोह प्राप्त गर्न सक्छन्, तर तपाईं राम्रो जब बिक्री को लागि एक राम्रो अंग्रेजी भाषा सीप आवश्यक हुनेछ. यी कार्यहरू मध्ये धेरै को लागि, हाकिमहरूले तपाईं आफ्नो सिस्टम प्रयोग गर्न प्रशिक्षण हुनेछ.
अन्य बिक्री जब अघिल्लो देखि कौशल र अनुभव आवश्यक. अक्सर बिक्री प्रबन्धकहरू र विश्वविद्यालय डिग्री को बिक्री प्रतिनिधिहरु. व्यापार मा डिग्री / डिग्री बिक्री र मार्केटिङ मा हुन सक्छ.
त्यहाँ छ बिक्री व्यवस्थापनका लागि अर्को बाटो आफ्नो बाटो मा काम गर्न छ. तपाईं एक सहायक बिक्री वा फोन बिक्री रूपमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले केही अनुभव बिक्री मा कौशल देखाइएको छ छ रूपमा लागि आफ्नो कम्पनी भित्र एक उच्च स्तर संग जब बित्तिकै लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं नजिकै अध्याय खोज्न
धेरै सामुदायिक कलेजहरु बिक्री र मार्केटिङ मा कक्षाहरू प्रस्ताव. तिनीहरूले लागि newcomers र विद्यार्थीहरू अंग्रेजी विशेष कक्षाहरू हुन सक्छ. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज खोजी.
एजेन्सी / संगठन resettlement केन्द्र काम आधारभूत सीप र अंग्रेजी कक्षाहरू प्रदान गर्नेछ. निकटतम रोजगार केन्द्र खोज्न.
तपाईं गर्नुपर्छ GED ®?
तपाईं चाहनुहुन्छ सिक्ने अंग्रेजी?
तपाईं स्थानीय काम केन्द्र प्रयोग
हरेक मुक्त शहर मा सरकार रोजगार केन्द्र. सल्लाह प्रदान गर्न र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले CVS र काम को प्रकारका मदत छन्. यसलाई रोजगारी र शिक्षा मा प्रशिक्षण को आफ्नो रसिद तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन्. निकटतम रोजगार केन्द्र खोज्न .
Salesjobs.com यो बिक्री जब सबै प्रकार मा विशेषज्ञता काम साइट हो
जागिर साक्षात्कार मा सफलता
अनलाइन सामान बिक्री
क्यारियर फुटकर क्यारियर Onestop बिक्री प्रतिनिधि
बिक्री करियर जानकारी र सरकारी तथ्याङ्क